Isahluko 9 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Amazwi Ami awaqondisiwe kuwe nje. Wonke umuntu ebandleni uyantula ngamazinga ehlukene. Kufanele nikhulume ngokwengeziwe, nikwazi ukudla nokuphuza ngokuzimela ngesikhathi semikhuleko yenu yokomoya, futhi nikwazi ukuqonda amaqiniso asemqoka ukuwenza ngokushesha. Kufanele ube nomuzwa wobuqobo bezwi Lami futhi uqonde umnyombo walo wangempela; qina futhi ungathambisi. Cabanga njalo ngezwi Lami futhi hlala ukhuluma Nami, futhi liyoya ngokuya lambulwa. Awukwazi ukusondela kuNkulunkulu ngomzuzu owodwa bese ngaphambi kokuthi inhliziyo yakho izothe phambi kukaNkulunkulu, uphazamiseke lapho enye into ikwehlela. Uhlala udidekile futhi ungacacelwa ngezinto futhi awukwazi ukubona ubuso Bami, ngakho awukwazi ukuqonda inhliziyo Yami ngokucacile. Noma ukwazi ukuqonda kancane awuqinisekile futhi usenokungabaza. Uma ngingakayiphathi ngokugcwele inhliziyo yakho nomqondo wakho ungasaphazanyiswa yizo zonke izinto zomhlaba, nalapho ulinda ngomqondo ocacile nothulile—kungaleso sikhathi lapho, kancane kancane, ngiyokwambula kini ngokuhambisana nezinhloso Zami. Kufanele niqonde le ndlela yokuba seduze Nami. Noma ngubani okushayayo noma okuqalekisayo, noma zizinhle kangakanani izinto abantu abakunika zona, akwamukelekile uma zikuvimba ekusondeleni kuNkulunkulu. Vumela inhliziyo yakho ibe sesandleni Sami futhi ungangishiyi nhlobo. Ngalolu hlobo lokusondelana nokuhlanganyela, kungakhathaleki ukuthi ngabazali, umyeni, izingane, izihlobo ezinye zomndeni, noma izibopho zakho zezwe lasemhlabeni, konke kuyontanta kuhambe. Uyothokozela ubumnandi obucishe bungachazeki enhliziyweni yakho futhi uzwe ukunambitheka okunephunga elihle nobumnandi, futhi ngempela ngeke uhlukaniseke Kimi. Uma kuhlala kuba nje, niyokuqonda lokho okusenhliziyweni Yami. Ngeke nhlobo neduke ngenkathi nilokhu niqhubekela phambili, ngoba ngiyindlela yenu, futhi konke kukhona ngenxa Yami. Ukuthi kukhule kangakanani ukuphila kwakho, lapho uyokwazi ukwahlukana nezwe lasemhlabeni, ukwazi ukulahla imizwelo yakho, ukwazi ukushiya umyeni nezingane zakho, lapho ukuphila kwakho kuyovuthwa khona… zonke lezi zinto zihambelana nohlelo Lwami. Akukho sidingo sokukhathazeka.
Ekuqaleni, isidingo sokuba nempilo efanele yasebandleni kwakukhulunywa ngayo kwizintshumayelo. Pho kungani impilo yasebandleni ingakathuthuki, futhi i…
Ukwamukela kwabantu amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe kwenza bakhanyiselwe ngokwengeziwe, futhi boma babuye balambe ngokwengeziwe ekufuneni kwabo ukwa…